ရင်သွေးလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေအပေါ် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့ ခံစားချက် | Duwun
အခုဆိုရင် ကိုယ်ဝန်က ၂၃ ပတ်ဖြစ်နေပါပြီတဲ့။
နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက သားလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်းအလိုလို အမှတ်တရတွေကို မှတ်တမ်းတင်ချင်သူပါတဲ့. အခုဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ ကိုယ်ဝန်က ၂၃ ပတ် ဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်.
သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဟာ အခုဆိုရင် ၂၃ ပတ် ရှိပြီလို့ ဆိုပါတယ်. သူမက ပထမဆုံးရင်သွေးလေးကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတာဖြစ်လို့ ကလေး လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်း အမှတ်တရ ဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်သဘောထားကိုလည်း အခုလို ရင်ဖွင့်ပြောပြထားပါတယ်.
''သားသားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးအမွှားလေးကအစ မှတ်တမ်းတင်ချင်တာ'' ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီခွဲက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် ငပလီကို ရောက်ရှိနေတဲ့ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုလည်း ဗိုက်ကလေးဖော်ရင်း 23 week ဆိုတဲ့ စာသားလေး ရေးပြီး တင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်.
နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့ ရင်သွေးလေးက သားလေးဖြစ်တာကြောင့် လည်း ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်စလုံး ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ နန်းမြတ်က အနုပညာအလုပ်တွေ ရပ်နားထားပြီး ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ပွဲတွေလောက်သာ တက်ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း နန်းမြတ်ရဲ့ သားလေးကို အရမ်းတွေ့ချင်နေပါပြီတဲ့။
ကိုတာတာမျိုးနဲ့ သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းတို့ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ မှာပဲ မင်္ဂလာသက်တမ်း ၁ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၁ နှစ်တာမှာလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အပါအဝင် စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခဲ့ကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကိုလည်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ကျေးှဇူးတင်စကား ပြောထားပါသေးတယ်။